जब परिवर्तन SMB। जुत्ता कार? जाडो टायर को स्थापना
को जाडो र प्रारम्भिक वसन्त हिउं पग्लनु पहिलो हिउँ: वर्षैभरि त्यहाँ समय दुई अवधि हो। यो के भन्दा STO अगाडी देख हो। त्यसपछि पर्याप्त काम। अनपेक्षित हिमपात आवरण बाटोमा चालक अप्रिय दुर्घटना सामना। साथै, पहिलो सकारात्मक तापमान धेरै मोटर चालकहरुलाई छुट्टी मा जाडो टायर पठाउन हतार। तपाईं जब परिवर्तन SMB। जुत्ता कार ध्यान सोच्न आवश्यक छ। ध्यान दिएर राम्ररी स्थापित टायर ड्राइव र आफ्नो दूरी राख्न आवश्यकता बिना।
प्रतिस्थापन गर्न अधिकतम समय
तुरुन्तै टायर परिवर्तन गर्न एक कारण रूपमा पहिलो हिउँ भर छैन। यो SMB परिवर्तन गर्न समय। जुत्ता कार जब संकेतक औसत दैनिक तापमान 5-8 डिग्री शून्य माथि। यो बाटोमा अवसर परिस्थिति जोगिन हुनेछ। मौसम अवस्था अक्सर अप्रत्याशित छन्, तर पनि बाटोमा हिउँ को उपस्थिति फुटपाथ उप-शून्य तापमान तल शांत समय छैन किनभने, लामो समय को लागि उहाँलाई झूट छैन।
प्रतिस्थापन लागि विशिष्ट पात्रो रूपरेखा उपलब्ध छैन, pereobut कार को नम्बर, कुनै एक साँच्चै थाह छ। गर्मी टायर मा जम्प सेवाहरू मा ठूलो प्रवाह लागि प्रतीक्षा बिना, अप्रिल को शुरुवात वा मध्य मा हुनुपर्छ। समयमै प्रतिस्थापन विश्वस्त महसुस र स्टेशन टायर फिटिङ मा अत्यधिक लाइनहरू जोगिन हुनेछ। यो खातामा सल्लाह लिन र आफ्नो अंतर्ज्ञान सुन्न आवश्यक छ।
यो गर्न हिउँदमा सार्न सम्भव छ गर्मी टायर?
टायर उपयुक्त मौसम अवस्था छैन भने, ती मा सवारी निषेधित गरिनेछ। टायर को गर्मी प्रकार जाडो अवस्थामा कार्यका लागि डिजाइन गरिएको छैन। तिनीहरूले आसंजन गुणहरू, dubeyut र सजिलै क्षतिग्रस्त, जो विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउन सक्छ गुमाउन। जाडो जूता व्यक्तिगत कार प्रदान गर्न हिउँ र चिसो अवस्था हरेक चालक को मुख्य लक्ष्य। जब केही दिनमा पहिलो चिसो, नियम, त्यहाँ अलिकति हिउं पग्लनु छ। यो जाडो लागि कार pereobut, त्यहाँ समय अवधि हुँदा थाहा नगर्ने लागि हो। पनि डिसेम्बर 1 मा, ट्राफिक प्रहरी जाडो सञ्चालनको समय मेल खाँदैन भनेर रबर मा सार्नका लागि एक चालक ठीक गर्ने अधिकार हुनेछ। मौसम आश्चर्य समातिएको - समस्या को घटना हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति एक सम्भावना छ। यस मामला मा, तपाईं जाडो टायर गर्न संक्रमण गर्न उपयुक्त केन्द्र मा पाङ्ग्रा लिन मित्र अनुरोध गर्न सक्छ। यी विकल्पहरू सिफारिस र सुरक्षित छन्। समस्या एउटा उत्कृष्ट समाधान जाडो टायर एउटा प्रतिस्थापन ड्राइव खरिद गर्न छ - त्यसपछि चिन्ता गर्न कुनै कारण छैन।
जाडो टायर मा प्लस तापमान को प्रभाव
कारहरुको लागि जूता को उत्पादन मा लगे कम्पनीहरु, इष्टतम तापमान अध्ययनहरू सधैं SMB परिवर्तन। जुत्ता कार, कि छ जब, भन्न स्थापना र टायर को उचित प्रयोग अवस्था। यो आफ्नो जाडो संस्करण ठण्डा अवस्थामा लचिलो रहिरहन्छ थियो। शून्य डिग्री माथि तापमान मा यस्तो रबर एक वृद्धि वेयर छ र कार एकदम फरक व्यवहार हुनेछ। गर्मी जूता जम्छ, deceleration को घटना बनाउन र अप्रभावी cornering, सडक सतहमा आसंजन को एक कम गुणक छ। निश्चित हुन, तपाईं, टायर निरीक्षण गर्ने जाडो tread देखि मलबे सफा गर्नुपर्छ र यसलाई समय समयमा साबुन र पानी संग धुन। यो पनि अक्सर असमान वेयर छ रूपमा पाङ्ग्रा ठाउँहरू, नियमित परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ। कारण हेरविचार एक ग्यारेन्टी उत्पादन को जीवन लम्ब्याउनु हो। अन्यथा आन्दोलन असुरक्षित हुन सक्छ।
जाडो र गर्मी टायर बीच मतभेद
जब विचार गर्दा जाडो लागि कार pereobut, मान्छे को एक ठूलो संख्या tread ढाँचा टायर को मुख्य मतभेद एक विचार गर्नुहोस्। मुख्य फरक सामाग्री टायर को संरचना छ। ठण्डा मौसम जाडो पाङ्ग्रा लोचदार हुँदा, कठोर छैन, सडक राम्रो युग्मन प्रदान गर्नुहोस्। को tread को डिजाइन कोटिंग एक adherent गुण छ। यी सुविधाहरू काम हुनेछ tread को जब solidification। जल र हिउँ प्रदान गर्न र पाङ्ग्रा र डामर बीच प्राकृतिक स्नेहक हटाउन ताकि यसको आकार डिजाइन गरिएको छ। त्यहाँ नवीन चिस्यान विकर्षक सामाग्री देखि विकसित टायर को मोडेल छन्। चालु, एथलेटिक्स पनि विपरीत गुण छ।
यो सबै-सिजन प्रयोग गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर?
धेरै आश्चर्य गर्दा चिसो र न्यानो बीच परिवर्तन SMB। जुत्ता कार। यो छोटो अवधिमा पाङ्ग्रा जूता यी प्रकार प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो एक अलग वर्ष एक विशेष समय विशेष डिजाइन गरिएको छ कि, जाडो र गर्मी लागि टायर प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
अर्थतन्त्रको दृश्य को बिन्दुबाट, सेट एक जोडी एक भन्दा लामो जीवन छ। उत्पादित जसको लागि वर्ष को समय अवधि प्रयोग रबर, उच्च वेयर प्रतिरोध द्वारा विशेषता र सडक मा वाहन को स्थिरता दिन्छ छ। यो सबै-सिजन टायर को शोषण नगर्न राम्रो छ।
जहाँ pereobut कार?
एक कार मा टायर परिवर्तन गर्न स्टेशन वा मर्मत भ्रमण गर्न आवश्यक हुनेछ, changer टायर व्यापार मा संलग्न छ। यो सबै आवश्यक प्राविधिक उपकरण छ। मास्टर स्टेशन मा अडान प्रयोग प्रतिस्थापन कार्य गर्दछ। superimposed नयाँ टायर को स्थापना को समयमा स्नेहन छाप। व्हील कोठामा प्रतिस्थापन पछि tubeless प्रकार आउन मतलब। सबै काम एक घण्टा लिन्छ। साथै काम एक ब्यालेन्स डिस्क पकड आवश्यक छ।
धेरै स्टेशन मा घर छोड्न मौका छ वर्तमान मोबाइल टायर changer टोली हुन सक्छ। सबै तिनीहरूले आधार कार मा माउन्ट छन् उपकरणहरू। केही पसलहरूमा एक मरम्मत टायर सेवाहरू छ। यो पार्श्व कट वा प्वाल पार्ने काम, जो पछि सम्भव थप लगातार सञ्चालन निर्मूल गर्न सम्भव छ।
मूल्य shinomontazhnyh काम
हामी जाडो टायर गर्न संक्रमण बनाउन अघि, सबैभन्दा चालक सोच छन् यो प्रक्रिया कति छ? टायर प्रतिस्थापन र सन्तुलित डिस्क बारेमा 800 rubles खर्च। यो पनि व्यवस्थापन स्टेशन मा निर्भर गर्दछ। कार्यशालाओं सबै मालिक लाभदायक समय टायर प्रतिस्थापन अवधि चिह्न, त्यसैले मूल्य निर्धारण फरक हुन सक्छ। केही मालिक बांधन STO, धेरै छ यस्तो भीड समय आफ्नो सेवाहरू लागि ठाउँ मूल्य पर्दाफास। धेरै संगठनों को टायर व्यापारीहरु र डिस्क टायर संग काम गर्दै छन् र यो लागि आधार बिना ड्राइव वा बस प्रतिस्थापन सम्भ्काउनु गर्न सक्नुहुन्छ। यस सन्दर्भमा, यो सचेत हुन आवश्यक छ।
केही स्टेशन रबर को मौसमी भण्डारण गर्न सेवाहरू प्रदान, र यो आफ्नो भण्डारण ठाउँ को अभाव मा राम्रो छ। यस्तो खुशी को मूल्य बारे 4,000 rubles हुनेछ। र पुरानो टायर को निपटान लागि पैसा केही रकम भुक्तानी गर्न हुनेछ। क्रममा अधिक पहेली छैन यो जानाजानी र लाइनहरू र उच्च खर्च बच्न समयमा सबै गर्न मिसिन pereobut लागत कति।
यो बेईमान सेवा संगठन निर्मूल गर्न सम्भव छ?
सिजन मा, धेरै कार्यशालाओं आफ्नो क्षेत्रमा गैर-व्यावसायिक विशेषज्ञहरु रोजगार। परिवर्तन SMB। जुत्ता कार ग्राहकहरु को एक ठूलो संख्या सवारी हुँदा त्यहाँ एक समय आउँछ किनभने यो, भर्खरै खुलेको विधानसभा कम्पनीहरु आकर्षक छूट भेटी लागू हुन्छ। त्यहाँ द्रुत मारा Jackpot लागि चाहनेहरूको धेरै छन्। अक्सर यी Rabotnicki घटिया सेवाहरू प्रदान गर्न, र तिनीहरूले सावधान रहन पर्छ। तिनीहरूले टायर अझै पनि सम्भव एक भन्दा बढी सिजन ड्राइव छ तापनि, टायर को खराब हालत र आफ्नो प्रतिस्थापन बारेमा भ्रामक हुन सक्छ। पनि गोप्य बोल्ट र सूत्रहरू को टाउको गर्न क्षति को संभावना छ।
तपाईं यो क्षेत्रमा छैन छल्न गर्न, धेरै वर्ष को लागि काम, को प्रमाणित सेवाहरू सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। एक सकारात्मक साइन एक रसिद issuing को संभावना, र क्रेडिट कार्ड सेवाहरू द्वारा भुक्तानीको लागि टर्मिनल को उपस्थिति छ। राम्रो, यदि आधुनिक प्राविधिक उपकरण वर्तमान छ। यो पनि यो प्रक्रिया मा अन्य चालक रुचि हुन सिफारिस गरिएको छ।
यसलाई आफ्नै टायर माउन्ट सञ्चालन पूरा गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर?
तपाईं आफ्नो हातले सबै केहि गर्न सक्छन्, तर तपाईंले केही उपकरण हुनुपर्छ। मिसिन कसरी pereobut गर्न छक्क परे गर्नेहरूका लागि, न्यूनतम खरीद वा दुई खींचने बनाउन आवश्यक छ। पहिलो उपकरण आधार देखि टायर विभाजन गर्न प्रयोग र बस मा दबाव अनुमति दिने, एक चल्ने भाग हुन्छन् छ। दोस्रो तत्व डिस्क मा उत्पादन समाधान गर्न आवश्यक छ। अर्को उपकरण डिस्क देखि रबर हटाउने लागि प्रयोग गरिएको छ (पहिलो Stripper विच्छेदन पछि)। यो एक रोलर गियर र तीन पिन हुन्छन्। तसर्थ, डिस्क यन्त्र निश्चित छ मा, रोलर लागू गरिन्छ र प्रमुख काँध रबर सनकी गियर। फलस्वरूप, यस टायर हटाइएको छ। उल्टो कार्यका लागि एक मनका रोलर भर्न आवश्यक छ। एक पाङ्ग्रा काम लगभग 20 मिनेट आवश्यक हुनेछ। तपाईं पनि प्रयोग उपकरण किन्न र आफैलाई लागि फिट बनाउन सक्छ। को चरम अवस्थामा यसलाई chisels प्रयोग गर्नुहुन्छ र तिनीहरू स्ट्रिपर्स रूपमा प्रयोग गर्न सम्भव छ। तर यस्तो प्रक्रिया थप समय लाग्न र धेरै भौतिक exertion आवश्यक हुनेछ।
त्यसैले, हामी कार र यो गर्न जब pereobut लागत कति बाहिर फेला परेन। कार कि होसियार ध्यान एक दिन आफ्नो जीवन बचाउन सक्छ सम्झना।
आफ्नै हातले रंगाई मिसिन
मर्सिडीज SL500: विनिर्देशों र समीक्षा
Graco Nautilus एलाइट - बच्चाहरु को लागि विश्वसनीय र सहज कार सिट
वाहन लागि बाल restraints: वर्णन, मूल्य र निर्माताहरु
पाँच-ढोका Niva को VAZ 2131 को समीक्षा
Lambi होटल3* (क्रेटे, ग्रीस): विवरण, दर, समीक्षा
धेरै काठिन्य - जीवन रोग को पाठ्यक्रम मा निर्भर गर्दछ
कारणहरू र नतिजा: मा गर्भावस्था दाँतको दुखाइको
ऊफा, BSAU: संकाय र संरक्षित
अलेक्जेन्डर3किन peacemaker भनिन्छ? ठूलो शक्ति को सम्राट को मुख्य गुण।
Selenga नदी: रूस र मङ्गोलिया नदीहरू अध्ययन
नाम तिमोथी को अर्थ के हो
बुनना सुन्दर कुराहरू सिक्न। ढाँचा "सेल" (सुई)
चमेलीडिया निमोनिया के हो? कारण, लक्षण र SARS को उपचार
सबैभन्दा को एसयूवी को दुनिया मा महंगा के हो?
बाह्य डाटा र विनिर्देशों शेवरलेट Lacetti hatchback